ှုiAtkos v7.0i Mac OS x86 installer - MYSTERY ZILLION
ှုiAtkos v7.0i Mac OS x86 installer
October 2010 edited October 2010 in Mac
iAtkos ကိုခက်ခက်ခဲခဲ သွင်းပီးတဲ့နောက်မှတော့ ပြသနာတွေတက်နေပါတယ်။Mac ကိုအရမ်းသုံးချင်နေလို့ပါ။
1. Dual boot တက်ချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲ။Windows7and iAtkos Mac 10.5.8
2. Kext ဆိုတဲ့ Kernel Extension ခေါ် Driver တွေဘယ်လိုသွင်းရပါသလဲ? Driver ကြောင့်ထင်ပါတယ် Screen Res အပြည့်မပေါ်ပါ။Air Port လဲ on လို့မရပါ။
3.တချိူ့ DMG တွေကို Run လိုက်ရင် ဖွင့်လို့မရပါ။မတက်လာပါ။
4.Extranal HD တပ်လိုက်ရင် HD ထဲကနေ Data တွေယူလို့တော့ရပါတယ်။HD ကို write လို့မရပါ။လိမ္မော်ရောင်ပုံလေးဖြစ်နေပါတယ်။
ကိုစေတန်တို့၊ကိုမောင်ပြုံးတို့ သိတဲ့လူတွေကူညီကြပါ။အားလုံးကို လေးစားလျှက်
Extranal HD က NTFS ဖြစ်နေလို့ပါ။ mac က NTFS write လို့မရပါ။ macforus မှာတော့ ရေးဘူးပါတယ်။ NTFS3G နဲ့ MacFuse ဆိုတာကို သွင်းရပါတယ်။